Talo Ku Socota Madaxweynaha Somalia, Mudane Xasan Sh. Maxamud-
By: Mukhatar Garaad Cali Buraale Sunday, September 30, 2012
Maqaal: Hambalyo iyo bogaadin Mudane madaxwayne, waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka �Asalaamu calaykum waraxmatulaahi wa barakaatu�.
Bacda salaan, anigoo ah mid ka mida malaayiinta soomaaliyeed eed madaxwaynaha u noqotey, kuna sugan dalka mareykanga, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahey xilka maanta lagu saartey, rabina kuugu gartey, adna aad isu soo taagtey.
Ma hubo in warqadani ku soo gaadhi, hadey ku soo gaadhana, inaad fursad u heli aad ku akhrisato, laakiin waa mid niyadeyda ka guuxaysey inaan kuu soo diro, laakiin caawa eebe qadarey inaan qoro. Mudane madaxweyne, marka hore waan kuu hambalyeynayaa, anigoo ku faraxsan inaad ku guulayesatey jagada madaxweyne ee dalka. Sababta aan ugu faraxsanahey maaha mid qabiil, waayo isku qabiil ma nihin, aqoon aan isku leenahay ma jirto, cid aan ku xidhanahey oo ikaa barteyna ma jirto, ee intii aad adigu ii sheegtey, xubnaha kalena sheegteen, ayaan kuula calmadey doorashada, taas oo ah mid sahlan. Markaan fiirshey xubnihii tartamayey, waxa aad aheyd shaqsiga qura ee dalka hooyo wax u qabtey, baaxadey doontaba ha leekaatee. Taasoo itustey in adiga oo awood u heley inaad qurbe aado, dhowr jeena yimid, aad ka dooratey inaad u hurto naftaada inaad wax ka qabato dalka, lugtana kula jirto gargaarada loo fidinayey dadyowkii tabaaleysnaa. Taas ayaad ku hanatey wadnaheyga.
Marka mudane madaxweyne, waa xil aad u weyn, rabina waxaan kaaga baryayaa inuu kuu fudeydiyo xilkaas, wadada toosana lugta kuu saaro, dhib kuu raaca aakhirona ilaahey kaa fogeeyo. Mudane madaxweyne, waxaan waraaqdan kuugu soo qorey in aan intii maskaxdeydu isiisey, rabina i garansiiyey, aan kaala talo bixiyo aragtideyda. Koley waan hubaa in talo aad meelwalba ka heleyso, hadey noqoto kuwa kaa ag dhow, kuwo ajanabi ah, iyo kuwo kaa fogba. Laakiin waa mid aan rabo iney ka soo baxdo niyadeyda, ilaaheyna ka baryayo inay kusoo gaadho.
Mudane madaxweyn, soomaaliya dhibteedu aad iyo aad bey u fara badan tahay, una maleyn mayo iney kuu suurto galeyso inaad wax ka wada qabato mudada 4ta sano ah ee lagu ilmadey. Marka mudane madaxweyne, waxaan jeclahey inaan dhowrkan qodob ee hoose aad fursad siisid, inay kuu hir galaan wareegan koowaad.
1. Codeynta umada soomaaliyeed:
a. Mudane madaxweyne waxaan filayaa inaad khibrab fiican u yeelatey daldaloolada iyo halaaga ka iman kara nidaamka codeynta, taas oo dani ina badey, oo si kaleeto oo loo dhigo ama ka wacan aysan jirin, marka loo fiirsho xaalkeynu ku jirney. Laakiin hada waxa dhalatey dowlad dhaba. Mudaney madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa in doorka dambe ee la codeyn doono, in qofkasta oo soomaali ahi fursad u helo inuu codkiisa ku dhiibto, meeluu joogaba. Si, looga xoroobo shakhsi afduuba shacabkii uu matalayey, kaasoo ku baayactamaya codkii bulshadiisa. b. Hawl dhibyar maaha, mana aha in la sahlado, waayo 4 sano waa mudo dheer hadii si loo fiirsho, laakiin dhakhso inagu soo gali karta, hadii aan laga faa’iideysan. Koley niyad jabka ugu wayni wuxuu imanayaa inaga oo sidii doorkii dhaweyd loo codeeyey, 4 sano kadibna loo codeeyo, oo umada soomaaliyeed ka qatanaano inay dhiibtaan codkooda.
c. Runtii waa arin aan sahlaneyn, oo wadata dhibteeda iyo imtixaankeeda, laakiin aan aad iyo aad u hubo in aynu leenahay awoodeeda iyo kartideeda, hadii aynu isla helno dad garashadeeda leh. Kuwo inala mid ahiba dad bay dayaxa u dirteen, inaguna waynu sameyn karnaa hab iyo nidaam qof walba oo soomaaliyeed codkiisa ku dhiibto, oo aan laheyn ama ay ku yartahey daldalool iyo musuqmaasaqu. d. Nidaamkii la sameeyaaba waa horumar, ay sii taba qaadi karaan kuwa dambe ee xilka loo dhiibo. Laakiin waxa runtii niyad jab ah in dhibtii shaleyto halkii taagan tahay wali, oo doorwalba laga indho rogto. Waxa ka quman in umad walba ay dhibtooda la hana qaadaan, laakiin aysan dib ugu laaban xalinta dhib ay aheyd in hore wax looga qabto. Marka mudane madaxwayne arintan oo ah mid aad muhiim u ah, runtiina ah mid la xasuusto marka doorashadu soo dhawaato, ha noqoto mid lagaa dhaxlo, oo jid u noqota umada soomaaliyeed.
2. Xadhiga adiga iyo umadaada:
a. Madane madaxweyne, koley diinta waad taqaanaa, waxaana lagaa rabaa in aad ka warheyso khofkasta oo soomaaliyeed ood masuul ka tahay. Ka faqiirka ah, ka jiran, ka talo bixiyaha ah, ka waalan, ka taajirka ah, ka agtaaga jooga, ka kaa fog, intaba waa in ay helaan fursad ay kugula soo xidhiidhi karaan, hadii baahidu timaado. Laakiin dabcan, waxa kuu imanaya waa nin ama gabadh garasho ama awoodoodu gaadhsiisey inay kuu yimaadaan ama kula kulmaan. Laakiin ka waran umada inteeda kaleeto, oon awoodaas ama garashadaas laheyn? Iridka ma soo dhaafayaan. Marka mudane madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa inaynu sameyno hab iyo nidaam ay umada soomaaliyeed u leedahey inay kugula soo xidhiidhaan, oo kugu soo gaadhsiiyaan aragtidooda, dhibta ay tabanayaan, talooyinkooda, dhaliishooda, iwm. b. Sida salaadu u tahay xadhiga adiga iyo ilaahey, ayaa arintana u tahay xadhiga adiga iyo umadaada soomaaliyeed. Dee ilaahey salaad ayuu u sameystey in dadkiisu kula soo xidhiidhaane, adigu maxaad ugu talo gashey inay soomaalidaadu kugula soo xidhiidho?
c. Runtii aad bay u fududahey inaad soomaali oo dhan awoodaas yeelato, waana sidan. Waxaynu sameyneynaa email gaar ahaaneed oo uu leeyahey guriga madaxtooyada, oo umadu ku soo dirto waraaqahooda (emails). Emailkaas waxaa ka masuul noqonaya shaqaale loo carbiyey akhrinta emailada iyo kala shaandheyntooda, ka dibna kuugu soo gudbinaya emailkaaga gaar ahaaneed, kuwii mudan inaad akhrisato, inta kaleetana warbixinadaada maalinlaha kuu soo bandhigaya, iyagoo kooban. d. Arintan ayaan ku talin lahaa inaysan ku eekaan guriga madaxtooyada, laakiin laga simo meelaha kala duwan ee dawladu ka shaqeyso, sida baarlamaanka, iyo golaha wasaaradaha kala duwan.
3. Saxida Dastuurka:
a. Runtii wax kasta oo la isku qabsado, heshiiskoodii hore ayaan wacneyn ama aan sifeysnen, ama dhameystirneyn. Dastuurku waa heshiiska ay umada soomaaliyeed ku heshiisey. Laakiin sida aad ogtahey, maaha mid dhameys tiran, umana dhowa meeshii la odhan karo, waa dhameys, mid dhaceysana maaha, maadaama umadu isu bedeli doonto, sida wakhtigu isku bedelo. Marka mudane madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ku dadaasho inaad dhameystir ku sameyso dastuurkeena, intii karaankaa ah. Runtii mid adigu aad awood u leedahay maaha, laakii waxaad awood u leedahay inaad usoo bandhigto aragtidaada iyo doodaadaba baarlamaanka soomaaliyeed. Meelaha ugu horeeya ee loo baahan yahay in laga doodo waxay kala yihiin:
i. Hogaanka dowlada:
1. Hogaankeenu hada waa Madaxweyne iyo Raysal Wasaare, laakiin waa labada qof oo ugu horeeya oo isku dhaca ama is qabta. Hadii aad dib u fiirisid hogaanadii kaa horeeyeyna, kuwo aan is qaban kuma jirin. Sababtuna waxay tahay, waa mid aysan soomaalidu u bisleyn hada, oo madaxweyne Siyaad Bare tirtirey. Madaxweynuhu wuxuu isku arkaa inuu yahay ninka dawlada u taliya sidii Siyaad Bare, laakiin nidaamku waa in Raysal Wasaaruhu u taliyo dawlada, madaxwaynaha warbixinta u keeno. Marka halkaas ayey ka timaadaa isku dhacu, marka Madaxwaynihii iyo Raysal Wasaarihiihu isku qabsadaan awoodooda iyo maamulka dawlada. Waxa looga badbaadi karaa waa dastuurka oo la saxo, oo hadii aynu rabno in Madaxwaynu u taliyo dawlada, aynu doorono madaxwayne ku xigeen, oo khadka aynu ka saarno Raysal Wasaarahan. Hadii doodu u badato in Raisal Wasaaruhu dawlada u taliyana, waa in Madaxweynuhu u hogaamsamaa inuu xilka u daayo Raysal Wasaaraha, oo kursigiisa ku e’kaado.
ii. Kitaabaka Quraanka iyo Dastuurka:
Maadaama aynu nahay umad muslimiin ah, way inoo fudutahay inaynu isku xukuno qawlka ilaahey iyo rasuulkiisa (scw) iyo kitaabka quraanka. Waa arin aad u wayn, una baahan in qadarinteeda la siiyo, ee aan lagu degdegin dhowrkan arimood awgood:
1. Waa run oo ilaahey quraankiisa wax ka wacan oo la isku xukumi karo ma jiro, ilaaheyna waa caadil, oo daalacanaya umadiisa. Laakiin inagu diyaar ma u nahay, caadils’e ma ka nahay qawlka ilaahey inaynu ka sinaaneyno, oon meelna musuqmaasuq ka soo galeyn? Waxay aniga ila tahay MAYA. Xaakiinka ama Xubin wayn oo dawlada ka mida u malayn maayo in ubadkooda iyo caroorta jokoraaga ahi in ay ka sinaanayaan.
2. Kitaabka eebe dadku isku si umada wada turjumaan, amaba ma yaqaaniin. Marka xeer aanan garaneyn macnihiisa, sidee baan u oofin karaa ama ugu hogaan sanaan karaa? Koley waxay xaqiiqdu tahay in hadii aad fiiriso umada soomaaliyeed, inta badan ee is haysa inay yihiin wadaad’ad’a umada soomaaliyeed, oo iyagu yaqaana ama lagu tuhmayo inay yaqaaniin macnaha kitaabka quraanka. Marka waxa is weydiin leh, maxaynu wadaado kala duwan u leenahay sida akhwaanka, jadiidiya, al itixaad, ilkaas, timo wayn, qaadariya, al shabaab, iyo kuwo kaloo badan, hadey dhamaan wada haystaan isku kitaab, oo isku si u yaqaaniin.
3. Marka mudane madaxwayne, waxaan kuu soo jeedinayaa in aan dastuurka lagu qurin in la isku xukumayo kitaabka quraanka ah, ee la qoro oo la cadeeyo waxa la isku xukumayo. Hadii qodob laga soo xiganayo kitaabka, waa arin fiican, laakiin ha la turjumo, oo afsoomaali ha lagu qoro, umadana ha loo sharxo, oo sidaas dastuurka ha ku kalo.
Mudane madaxweyne waan ogahay arimahan sare ku xusani, inaysan umada soomaaliyeed ka saareynin gaajada iyo abaaraha, inaysan wadooyin u jeexeynin, inaysan caafimaadka ama waxbarashada wax ka qabaneynin, ineynsan amaanka kor usiyaadineynin, laakiin waxaan hubaa in hadii ay kuu hir galaan arimahaasi, in aad horumar wayn gaadhsiisey umada soomaaliyeed, kana talaabisey biriish weyn, oon laga gudbeen. Taasaana noo fudeydinaysa inaanu gaadhno horumarka la rabo inaanu hiigsano. Waan ogahay inay ku horyaalaan hawlo kale oo aad uga muhiimsan, sida nabadgalyada iyo siguda amniga wadankeena, laakiin waa arimo hadii aadan hada xalkooda sii hilaacsan, ay hadhowto noqon doonto kuwa aan hirgali karin, siiba qodobka koowaad. Markaleeto, mudane madaxweyne waxa ku leeyahay hambalyo, ilaaheyna ha kaa dhigo kii noo horseeda horumarka aanu wada rabno, dibna noogu soo celiya wadanimadii iyo xornimadii lanaga qaadey ama naga luntey.
Mukhtaar G. Cali Buraale